सभामुखकाे युकेमा ब्यस्त पहिलाे दिन | We Nepali
सभामुखकाे युकेमा ब्यस्त पहिलाे दिन
वीनेपाली | २०७३ वैशाख ६ गते १०:१९
सभामुखलाइ मायाकाे चिनाे दिँदै मगर संघ युकेका अध्यक्ष नेम थापा/ तस्वीर मिलन तमु
लण्डन । इन्टर पार्लियामेण्ट्री ग्रुपको निम्तोमा एकसाता लामो युके भ्रमणमा आएकी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको पहिलो दिन धपेडीमा बित्यो ।
ठूला चार दलका प्रमुख सचेतकहरु, संसदका महासचिवसहित आइतबार बिहान हिथ्रो विमानस्थल ओर्लेकी उनी सीधै उनीहरुको लागि प्रबन्ध गरिएको हिल्टन होटल, वेष्टमिन्स्टर पुगेकी थिइन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका लागि बुक भएका कोठा आइतबार (दिउँसो) देखि मात्र लागू हुने भएकाले होटलकै एउटा कोठामा सामान राखेर हतारहतार हातमुख धोइ उनी मगर संघ युकेको कार्यक्रमतर्फ लागिन् ।
करिब डेढघण्टाको कार यात्रा उनले थोरै त्यहीं थकाइ मात्र पाइन् । फार्नब्रोको मगर भवनमा उनी पुग्दा आयोजकहरु उनलाई करिब दुईघण्टा कुरेर बसेका थिए । तीन लहरमा उभिएका सर्वसाधारणहरुबाट खादा, पुष्पगुच्छा लिएपछि उनलाई मगर संघ युकेका बारेमा अध्यक्ष नेम थापा र उपाध्यक्ष बम सूर्यबंशीले जानकारी गराए । त्यसपछि उनले उपस्थित समुदायलाई सम्बोधन गरिन् ।
नेपालमा पहिलोपटक जनप्रतिनिधिहरुले संविधान लेखेकोमा गर्व लागेको भन्दै उनले संविधानलाई पूर्ण बनाउन अझै बाँकी रहेको विचार राखिन् । संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेकाले अब भेदभाव बाँकी नरहेको उल्लेख गरिन् । तर संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन मुख्य चुनौती रहेको उनको विचार थियो ।
सामूहिक, पारिवारिक फोटो सेसनपछि उनी गैरआवासीय नेपाली संघ युकेले आयोजना गरेको कार्यक्रमस्थलतर्फ लागिन् । उनी पुग्दा अल्डरसटस्थित किंग्स सेन्टर भरिभराउ भइसकेको थियो । खाना खाइसक्ने बित्तिकै एनआरएनए युकेका अध्यक्ष मुच्छेत्र गुरुङको अध्यक्षतामा कार्यक्रम शुरु भयो । महासचिव विजयविक्रम लिंगदेनले संचालन र उपाध्यक्ष कुमारी गुरुङले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गरेको कार्यक्रममा युकेस्थित नेपाली राजनीतिक पार्टी, एनआरएन प्रतिनिधि, गोरखा भूपू सैनिकका संस्थाहरुले आफ्ना माग, असन्तुष्टी र नेपाल सरकारले गर्नपर्ने कामका फेहरिस्त पोखे । जसमा गोरखा सत्याग्रहका ज्ञानराज राई र डा. रामनारायण कन्दङवा, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ (नेसा)का अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, नेपाली जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष लोक गुरुङ, जनएकता समाजका पूर्ण लोक्सम, जनप्रगतिशील मञ्चका सुरेन्द्र श्रेष्ठ र एनआरएन युरोप संयोजक कुल आचार्य थिए ।
मंचमा रहेका नेपाली काँग्रेस र एनेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतकहरु चिनकाजी श्रेष्ठ र हितराज पाण्डेलाई बोल्ने मौका नदिई प्रमुख अतिथि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई मञ्चमा बोलाउँदा मंचमा रहेका अतिथिहरु नै छक्क परेका थिए ।
‘सांसदज्यूहरुको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै’ बोलेकी घर्तीमगरले नेपाल बेलायतबीचको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने बताइन् । गोरखाहरुका पक्षमा आफ्नो भेटहरुमा कुरा उठाउने आश्वासन उनले दिइन् । एनआरएनहरुलाई नेपालमा लगानीमैत्री कस्तो कानुन चाहिने हो त्यो बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । नेपालको राजनीतिक पार्टीहरु जटिल समयकालमा एकतावद्ध भएको उल्लेख गर्दै अबको नेपालको अजेण्डा सम्बृद्धि, विकास र उन्नति भएको बताइन् ।
कार्यक्रम समापनपछि छोटो फोटोसेसन भयो । यतिञ्जेलमा किंग्स सेन्टरको माथिल्लो तलामा पर्खेर बसेको गोरखा सत्याग्रहको टोली सभामुखलाई लिन आइसकेको थियो ।
सत्याग्रहका अल्डरसट समितिका अध्यक्ष हितमान गुरुङको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा निर्देशक ज्ञानराज राई, संयोजक कृष्णबहादुर राई, गोरखा दुत डा. रामनारायण कन्दङवा, सहसंयोजक सूर्य नेम्वाङलगायतले गोरखाहरुको समस्याको बेलीविस्तार लगाए । संसदका सचिव मुकुन्द शर्मा पौड्याल, एमाओवादीका सचेतक हितराज पाण्डेले गोरखाहरुको माग जायज भएको भन्दै संसद र आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताए । त्यसपछि पालो आयो सभामुख घर्तीमगरको । करिब १२ घण्टाको हवाइ यात्रा र त्यसपछिको निरन्तर कार्यक्रमले उनको चेहरामा थकान प्रष्टै देखिन्थ्यो ।
उनले गोरखाहरुलाई आश्वासन दिँदै नेपाल सरकारले सदाभन्दा यसपटक गोरखाहरुको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको बताइन् । युके आउनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसित परामर्श गरेको भन्दै उनले नेपाली प्रधानमन्त्री गोरखाहरुका बारेमा नेपाली संसदमा समिति बनाउन सकारात्मक रहेको जानकारी दिइन् । उनले गोरखाहरुको भेदभाव चाँडै अन्त्य हुने आशा पनि व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रम सकेर साँझ करिब ८ बजे सभामुख घर्ती होटलतर्फ लागिन् । सोमबार बिहानैदेखि औपचारिक भेटघाट र छलफलमा उनी सहभागी हुनेछिन् ।
एनअारएनए युकेकाे कार्यक्रम/ तस्वीर मिलन तमु
गाेरखा सत्याग्रहकाे कार्यक्रम/ तस्वीर मिलन तमु
सभामुखकाे स्वागतमा मगर भवनमा पर्खँदै / तस्वीर मिलन तमु